Drone Event Banner Manufacturers - China Drone Event Banner Suppliers & Factory
Gedhi remhete remukati, pop-out dhizaini, yakareruka uye inotakurika drone racing gedhi rine maLoopholes akatenderedza gedhi iro rinogona kubvumira mwenje tambo kupinda, mamwe mabhesi esarudzo aripo, anounza kunakidzwa kwekumhanya.
Indoor D gedhi iFPV racing gedhi rakagadzirirwa drone racing makwikwi, mashandisiro acho akafanana neyemukati mhete gedhi asi akasiyana chimiro.Zvinhu zvemhando yepamusoro uye zvehunyanzvi, zvakapedzwa kutarisa.Nezvakawanda zvekukwira sarudzo, zviri nyore kuvaka akasiyana makosi.
Indoor arch mhete iMicro FPV gedhi rinobhururuka reTiny Whoop Inductrix uye Micro Racing Drones, kushandiswa kwakafanana negedhi remhete remukati uye gedhi remukati D asi chimiro chakasiyana.Zvinhu zvemhando yepamusoro uye zvehunyanzvi, zvakapedzwa kutarisa.Nezvakawanda zvekukwira sarudzo, zviri nyore kuvaka akasiyana makosi.
Gedhi rekunze rakatenderedzwa, imwe mhando yeanozivikanwa Quadcopter Racing Gates yausingade kupotsa, yakagadzirirwa chete drone racing.Zvinhu zvemhando yepamusoro uye zvehunyanzvi, zvakapedzwa kutarisa.yemhando yepamusoro FPV Mujaho Mhepo mhete gedhi.
Mureza wakagadzirwa nepolyester warp yakarukwa jira uye yakasimba zvakakwana kuti ishandiswe kunze mumamiriro ekunze mazhinji.
Kunze arch gedhi rinonyanya kufarirwa mhepo gedhi iro rinogonesa iwe kumisikidza inonetsa FPV mujaho track zviri nyore uye nekukurumidza, Sarudzo yakakwana yeFPV Race varongi, makirabhu uye kunyangwe kune vanhu vanoda kuyedza nekuvandudza hunyanzvi hwavo hwekubhururuka hweFPV.
Inoshandiswawo kumitambo yekukurudzira kana chiitiko chiratidziro, semuenzaniso, yekutanga kana Pedzisa mutsara wezviitiko zvekirabhu zvinonakidza.
Graphics inogona kugadzirwa, Tough naironi jira rakasimba rekushandisa mukati / kunze.
Pane 3 main base sarudzo inoenderana nenzvimbo dzakasiyana uye nzvimbo dzekuratidzira.
Chiitiko square arch gedhi banner, Yakakwana yekutanga uye yekupedzisa mitsetse, kana seKutanga magedhi uye Pedzisa magedhi eFpv drone racing, zvakare inogona kushandiswa sechiitiko gedhi kana yekusimudzira gedhi arches semhemberero chitoro kuvhurwa, mitambo yekusimudzira.Graphics inogona kugadzirwa, Tough naironi jira rakasimba rekushandisa mukati / kunze.
Zviitiko zvakawanda zvazvino zveFPV zvemujaho zvinoshandisa mireza yemakaka pamwe neDIY FPV magedhi emujaho, Yakagadzirirwa maFPV emujaho, anooneka zvakanyanya uye anogara mumhepo uye anopa mareferensi akanakisa ekuona panzvimbo yako yeFPV Track/Course.. aya masuwo anogadzirwa jira rinoramba .Yakagadzirwa neinorema-wall fiberglass pole.Yese mireza mireza iri nyore kumisikidza uye yakakura mabhesi aunogona kusarudza kushandisa pane yakapfava kana yakaoma pasi.